Viking ngenkemba, noma, njengoba zibizwa kanjalo, Viking Sword, kwaba sasivumela okwandile eYurophu phakathi ekuqaleni kweNkathi Ephakathi. Leli gama wathola e ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili zobuciko ababiza lolu hlobo inkemba yokudumisa lwamakhosi Carolingian, owathatha iminyaka engu-127 kuphela ubudala.
Yini ehlukanisa Viking Sword
Ekupheleni owokuqala ekuqaleni kwenkulungwane yesibili yeminyaka, lokhu inkemba wayeyinhloko izikhali ezivamile bladed. EYurophu lehla ngokushesha inani ngisho phezu loMfula iVolga ukumhlangabeza kwakuyinsakavukela. Kuyinto kithi, townsfolk elula, zonke izinkemba kubonakale ukubheka efanayo. Kodwa ukuhlukanisa zenye kusuka kwenye isikhali lula onguchwepheshe.
Uyini umahluko kusuka Merovingian Viking Sword? Inkemba wesibili futhi ogama lakhe behlonipha lwamakhosi, kodwa Merovingian. Kodwa kulo mhlangano, igama ayibalulekile. Uhlobo ngalunye isikhali is zihlukaniswa ngokuyinhloko ukuma kanye nomklamo. Ngokwesibonelo, hilt lwenkemba Carolingian kuyinto inhlangano elula sekugcineni ezishibhile. Lolu hlobo isikhali baba atholakale amasosha abavamile.
Inkemba uhlobo Carolingian anisoze wayesifanele yempi kwesosha. Wayesebenza kahle ekupheleni oyindilinga, futhi injongo yayo iwukuhlola hhayi nquma futhi Hack. Phansi ukwakheka tight kakhulu ngesikhathi sempi, wayengumuntu kunalokho umthwalo. Ngaphezu kwalokho, inani kuyinto elula kakhulu kwalesi sigameko. Kodwa ngemuva kokuhlinzwa behlukana iqhawe, kokuba ehlome ngenkemba, yayingekho efana. Ezimweni eziningi, Viking Sword - isikhali esasetshenziswa empini Equestrian.
Ushintsho ekuklanyweni ikhaba inkemba
Inkemba iqonde, ububanzi, sasivumela esindayo Nenkemba esika nhlangothi zombili, ekupheleni okuyinto kwaba inhlobo oyindilinga. Phakathi ikhaba nhlangothi zombili kukhona furrow kokuzihlanganisa (i-USD), okuyinto ladliwa Krovostok, kodwa lokhu ngokuphelele abuqinisile. Dol - isici design ukuthi kwenza kube lula kakhudlwana ukuba Viking Sword. Isisindo kanye nosayizi yesisindo sayo owaziwa - 1-2 kg, ubude - 90 cm ububanzi - 5.6 cm Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi isandla engakutholi ukhathele .. It ikuvumela ukuba zinde amadola strip ngaphandle okwandisa isisindo futhi ngaphandle kokudala ngokweqile umthwalo ingalo. Ngo womshini izikhali ezibizayo zamadola kungaba zokuhlobisa. Isibambo mfushane kakhulu.
Ukushintsha hilt lwenkemba
It usebhekene ushintsho okuphawulekayo hilt lwenkemba. Garda, eyayihlanganisa izingxenye ezintathu, waqala ukwenza Monolithic, lula kakhulu umklamo. Wahlala futhi wakhonza esifushane, okungenzeka kakhulu, ngoba iziteshi isandla.
Ingxenye engenhla Awe-Pommel - Awe-Pommel - siqukethe Amabha amabili esikhundleni ezintathu. Ingxenye yokuqala - base. Esesibili - engxenyeni engenhla umkaki ukuthi evala hilt. It wayengadlali onikeza inkemba olunothile, ukuqashelwa kanye ehlukile. Nakuba Viking Sword ubhekwa ethandwa, kwaba yilelo nalelo butho ngingathanda ukukunika ekhethekile okwakhe izikhali. Lokhu kungafezwa ngezithukuthuku zokuhlobisa phezulu. nock Okokuqala iphethini ke baxoshwa izinsimbi ethambile futhi ezibizayo: ithusi, ithini, isiliva negolide. Umphumela waba uhlobo umhlobiso. Lokhu kwenziwa ngo Jewelers.
Distribution lwenkemba Carolingian
izinkemba Yande kwaba ngo IX-X zaseScandinavia leminyaka, Celtic indawo Frankish. izinkemba Carolingian weza eRussia kusukela eScandinavia ngu amaViking futhi esetshenziswa. Bobabili amazwe, wenza eYurophu, futhi wenza abakhandi bensimbi Russian. Ngaphambi kokufika le Carolingian inkemba rusichi wahlangana Oriental Persian futhi Arabhu izindwani. Safunda indlela yokukha aphele futhi ukukhiqiza eliphezulu damask izikhali zonke ezisika nhlangothi zombili.
amakhosi Russian ekhiqizwa Carolingians okuyinto neze kunabayeni eNtshonalanga. Ukukhiqiza ubuchwepheshe wawunzima futhi kwakuba uchungechunge imisebenzi: ukulungiselela metal, edonsa bladed band, tempering, wokucwebezelisa, honing, tekwentiwa hilt, scabbard. inkemba Good - isikhali hhayi ezishibhile. Kuyinto ngokuvamile zazibiza imali eshisiwe. e-izingalo Ochwepheshe kungacacisa ukuthi lapho okwenziwe wathola ikhophi ye ngalo senziwa okuyinhloko.
Inhlamba of the master
Ngokuvamile inkemba blade kungabonwa brand. Lokhu akusona isimanga. master ngasinye, ababebeka imali eningi umzamo ezinganeni zabo, bafuna ukujabulisa igama ke yakhe. Kuyinto uhlobo lokuhweba. Izikhali Uchwepheshe inhlamba ukutshela izinto eziningi: lapho wenza, ngendlela bokulwa ayenakho ukuya.
Le nkampani eyaziwa kakhulu owadala izinkemba Carolingian, Ulfberht. isitembu wakhe itholakala kuwo wonke blade yesihlanu. Izinkemba nenhlamba enjalo atholakele eRussia, Finland naseNorway. Inani elikhulu amakhophi nge inhlamba kanye ukusabalala anhlobonhlobo unika ngezizathu ukucabanga ukuthi lokhu kwaba workshop esikhulu, okuyinto baqashwe izingcweti eziningi.
Sekukonke zikhona mayelana 115 Carolingian nenhlamba ehamba. Kuyaphawuleka ukuthi hilts zabo akuzona ezifanayo isesimweni, ungakwazi ukuchaza amaningi njengoba 14 izinhlobo. Ochwepheshe ephethwe ukusungula ukuthi amashabhu ukuthi ekhiqizwa izinkemba kanye lolo phawu, babe edolobheni Rhine emfuleni eJalimane. Le brand kungabonwa hhayi kuphela Carolingian kodwa futhi kwamanye izindwani.
Iyini imfihlo ye-ithandwa kangaka? I okusezingeni eliphezulu carbon okuqukethwe, okunikeza amandla izindwani steel. Ukuba khona kwawo kuyinto 0.75%, kuyilapho asele 0.5% esiphezulu. Ngokuvamile, phezu kwenkemba, ungafunda igama lomnikazi.
Tea imikhuhlane ginger - ikhambi lazo zonke umndeni
Inzuzo nokulahlekelwa ezimali. Ukuphuthuma-akhawunti yakhe.